Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyada qarax lala eegtay saldhig booliis oo kuyaala Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo sheegatay masuuliyada qarax lala eegtay saldhig booliis oo kuyaala Kismaayo
June 5, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Sawirka: Archive]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qarax lala eegtay saldhig booliis oo kuyaala gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo maanta oo Isniin ah.
Wakaalada wararka Reuters ayaa soo xigatay afhayeenka howlgalada milatariga u qaabilsan Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab oo dhahaya: “Waxaanu bumbo ku talaalnay gudaha saldhiga Kismaayo. Waxaanu dilnay afar askari 27 kalena waa ay ku dhaawacmeen.”
Ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in hal askari uu ku dhintay qaraxa.
Al-Shabaab ayaa lumisay gacan ku haynta magaalada Kismaayo sanadkii 2012-kii, kadib markii ay kala wareegeen ciidamada Jubbaland oo taageero ka helaya ciidanka Kenya.
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa shaybaar cilmiyeedka dambiyada ka sameysay gudaha magaalada Garoowe, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Puntland. Shaybaarka ayaa baari doona oo kala saari doona dambiyada iyada oo loo marayo qaab saynis ah, sida ay [...]